Aye Win | UNIC Yangon | Page 2
Author Archives: Aye Win
ကုသလမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Christine Schraner-Burgener ၏ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့မှ ၁၈ ရက်နေ့အထိ ခရီးစဉ်အပြီး သတင်းမီဒီယာသို့ အကြောင်းကြားစာ
Zawgyi font (Unicode below)
ကုသလမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်ရုံးကိုယ်စား ထုတ်ဝေသည်။
နေပြည်တော်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်နေ့။
ကုသလမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့မှ ၁၈ ရက်နေ့အထိ သွားရောက်ခဲ့သည်။ သူမသည် ရန်ကုန်မြို့တွင် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တွေးခေါ်မျှော်မြင်ရေးအဖွဲ့များ (think-tanks)၊ ထင်ရှားကျော်ကြားသောပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သံတမန်တို့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီအထောက်အပံ့ ပေးရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း (UEHRD)နှင့် ယခင် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေး ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များတို့နှင့်ပါ တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် သူမသည် မြေပုံမြို့နှင့် စစ်တွေမြို့တို့ကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး၊ ရခိုင်နှင့် မွတ်စလင် လူမှု အသိုင်းအဝိုင်း နှစ်ခုစလုံးမှ နေရပ်စွန့်ခွာသူများ နေထိုင်ရာစခန်းများသို့ သွားရောက်ခဲ့သည့်အပြင်၊ ပြန်လည် နေရာချထားသော ရခိုင်လူမျိုးများကိုလည်း တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထို့အပြင် သူမသည် အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်း များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ လွှတ်တော်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရနှင့်လည်း တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူမသည် အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ၊ စစ်တွေမြို့အခြေစိုက်သော ကုသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။
နေပြည်တော်တွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေး နှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ၊ ပညာရေး ဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးသိမ်းကြီး၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် တပ်မတော်မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းအပါအဝင် အစိုးရအရာရှိများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ သည်။ သူမသည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာအောင်နှင့် ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသား လွှတ်တော်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ ပြည်သူတို့၏တိုင်ကြားစာဆိုင်ရာ ကော်မတီများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
နေရပ်စွန့်ခွာသူစခန်းများ ပိတ်သိမ်းရေး မဟာဗျူဟာရေးဆွဲခြင်းကို အပြီးသတ်ပြီး၊ ဖြန့်ချီရန် အဆင်သင့် ရှိနေခြင်းကို သူမက ကြိုဆိုပါသည်။ သို့သော်၊ ဥပမာအားဖြင့် မြေပုံမြို့တွင် နေရပ်စွန့်ခွာသူ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း မှာ နိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူထားသော်လည်း ၎င်းတို့၏ သွားလာလှုပ်ရှားမှု လွတ်လပ်ခွင့်ကို အလွန် ကန့်သတ် ထားသဖြင့် သူမက စိတ်ပျက်မိပါသည်။ သူမ၏ ဆွေးနွေးမှုများတွင် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် လူမှု အသိုင်းအဝိုင်းများအတွင်းနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအကြား ခွဲခြားမှုများ ပါဝင်ပါသည်။ ယင်းကိစ္စရပ်များ ကို ဖြေရှင်းကျော်လွှားကြရန် သူမက အကြိမ်ကြိမ် အလေးထား ပြောကြားခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း စီးပွားရေး၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် နိုင်ငံရေးနယ်ပယ် အသီးသီးမှ အမျိုးသမီး ၄၀ ကျော်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ရာတွင် နယ်ပယ်စုံမှ အမျိုးသမီးများနှင့် အတွေ့အကြုံဖလှယ်ပြီး၊ တူညီမှုများရှိသကဲ့သို့ ကွဲပြားသည့် အတွေ့အကြုံများရှိနေခြင်းကို သိရှိခွင့် ရခဲ့ခြင်းကို ကြိုဆိုပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ တွေ့ဆုံမှုများကို ထပ်မံ စီစဉ်ခြင်း၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ တွေ့ဆုံထိတွေ့ခြင်းတို့ဖြင့် ခိုင်မာမှုမရှိသော ယုံကြည်မှုကို ပြုပြင် စေနိုင်သည်။ အချို့ အသိုင်းအဝိုင်းများအကြား ကူးလူးဆက်ဆံမှုမှာ တဖြည်းဖြည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေ သည်ကို ကြားသိရသဖြင့် ထိုကဲ့သို့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရန် သူမက အားပေးပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပိုမို သဟဇာတဖြစ်သော အတူတကွနေထိုင်မှုကို ဦးတည်ရန်လည်ကောင်း၊ နေရပ်စွန့်ခွာသူများနှင့် ဒုက္ခသည်များ လုံခြုံစွာ၊ သိက္ခာရှိစွာ မိမိတို့ရွေးချယ်ထားသော နေရပ်များသို့ မိမိဆန္ဒအလျောက် ပြန်လည် ရောက်ရှိလာနိုင်ရေးကို ဦးတည်သောအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ အထူး ကိုယ်စားလှယ်၏ ခရီးစဉ်၌ အမျိုးသမီးရေးရာဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ပညာရေး လက်လှမ်းမီနိုင်ရေး ကိစ္စရပ်များနှင့် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးကိစ္စရပ်များကို အရေးပေးခဲ့သည်။
နေပြည်တော်တွင် သူမသည် အဆင့်တူပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းစုံနှင့် ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ နယူးယောက်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် သူမ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ ကို နေပြည်တော်တွင် ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ကျောင်းသားများ တက္ကသိုလ်ပညာရရှိနိုင်ရေးကိုလည်းကောင်း၊ တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်မတော် အကြား အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲရေးကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဆွေးနွေးရန် လိုအပ်ခြင်းကိုလည်းကောင်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ပဋိပက္ခတွင်ပါဝင်သူများမှ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေများကို လိုက်နာရန် အရေးကြီးကြောင်းကို သူမက အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ သူမအနေနှင့် နှစ်ခြမ်းကွဲနေသော အယူအဆများ ပိုမိုများပြားလာနေသည်ကို ခံစားနေရသဖြင့်၊ သက်ဆိုင်နေသည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ၊ ဒေသခံ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအပြင် နေရပ်စွန့်ခွာသူများနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေသော ဒုက္ခသည်များအကြားလည်းကောင်း၊ အချင်းချင်း၌လည်းကောင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်ကြောင်း အလေးအနက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ ဒုက္ခသည်များ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထွက်ခွာစေခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်များ၏ ဒုတိယ နှစ်ပတ်လည်အကြိုတွင် အပြုသဘောဆက်ဆံခြင်းနှင့် လူထုအားလုံးကိုလက်ကမ်းပေးကြရန် တောင်းဆို လိုက်ပါသည်။ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများ၊ အမုန်းစကားများနှင့် ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေး ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အသုံးချခြင်းများကို အစိုးရအနေနှင့်လည်း ပြင်းထန်စွာ ဆန့်ကျင်ရန် တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။
ကုသလမဂ်ဂအတှငျးရေးမှူးခြုပျ၏ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အထူးကိုယျစားလှယျရုံးကိုယျစား ထုတျဝသေညျ။
ကုသလမဂ်ဂအတှငျးရေးမှူးခြုပျ၏ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အထူးကိုယျစားလှယျ Christine Schraner-Burgener ၏ မွနျမာနိုငျငံသို့ ဇူလိုငျလ ၉ ရကျနမှေ့ ၁၈ ရကျနအေ့ထိ ခရီးစဉျအပွီး သတငျးမီဒီယာသို့ အကွောငျးကွားစာ
နပွေညျတျော။ ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဇူလိုငျလ ၁၈ ရကျနေ့။
ကုသလမဂ်ဂအတှငျးရေးမှူးခြုပျ၏ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အထူးကိုယျစားလှယျသညျ မွနျမာနိုငျငံသို့ ဇူလိုငျလ ၉ ရကျနမှေ့ ၁၈ ရကျနအေ့ထိ သှားရောကျခဲ့သညျ။ သူမသညျ ရနျကုနျမွို့တှငျ အရပျဖကျအဖှဲ့အစညျးမြားမှ ကိုယျစားလှယျမြား၊ တှေးချေါမြှျောမွငျရေးအဖှဲ့မြား (think-tanks)၊ ထငျရှားကြျောကွားသောပုဂ်ဂိုလျမြား၊ အစိုးရမဟုတျသော အဖှဲ့အစညျးမြား၊ ကုလသမဂ်ဂ အဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ သံတမနျတို့နှငျ့ တှဆေုံ့ခဲ့သညျ။ ထို့အပွငျ ဘာသာရေးခေါငျးဆောငျမြား၊ ရခိုငျပွညျနယျတှငျး လူသားခငျြးစာနာမှုအကူအညီအထောကျအပံ့ ပေးရေး၊ ပွနျလညျနရောခထြားရေး၊ ဖှံ့ဖွိုးရေးစီမံကိနျး (UEHRD)နှငျ့ ယခငျ ရခိုငျပွညျနယျဆိုငျရာ အကွံပေး ကျောမရှငျ အဖှဲ့ဝငျမြားတို့နှငျ့ပါ တှဆေုံ့ခဲ့သညျ။
ရခိုငျပွညျနယျတှငျ သူမသညျ မွပေုံမွို့နှငျ့ စဈတှမွေို့တို့ကို သှားရောကျခဲ့ပွီး၊ ရခိုငျနှငျ့ မှတျစလငျ လူမှု အသိုငျးအဝိုငျး နှဈခုစလုံးမှ နရေပျစှနျ့ခှာသူမြား နထေိုငျရာစခနျးမြားသို့ သှားရောကျခဲ့သညျ့အပွငျ၊ ပွနျလညျ နရောခထြားသော ရခိုငျလူမြိုးမြားကိုလညျး တှဆေုံ့ခဲ့သညျ။ ထို့အပွငျ သူမသညျ အရပျဖကျ အဖှဲ့အစညျး မြားမှ ကိုယျစားလှယျမြား၊ နိုငျငံရေးပါတီမြား၊ လှတျတျောအဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ ရခိုငျပွညျနယျ အစိုးရနှငျ့လညျး တှဆေုံ့ခဲ့သညျ။ သူမသညျ အစိုးရမဟုတျသောအဖှဲ့အစညျးမြား၊ စဈတှမွေို့အခွစေိုကျသော ကုသမဂ်ဂ အဖှဲ့အစညျးမြား၏ ကိုယျစားလှယျမြားနှငျ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးခဲ့သညျ။
နပွေညျတျောတှငျ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံ ပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ၊ လူမှုဝနျထမျး ကယျဆယျရေး နှငျ့ ပွနျလညျနရောခထြားရေး ဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာဝငျးမွတျအေး၊ အလုပျသမား၊ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးနှငျ့ ပွညျသူ့အငျအား ဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးသိနျးဆှေ၊ ပညာရေး ဝနျကွီး ဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာ မြိုးသိမျးကွီး၊ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံရုံး ဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစု ဝနျကွီး ဦးကြျောတငျ့ဆှေ၊ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးကြျောတငျနှငျ့ တပျမတျောမှ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျးအပါအဝငျ အစိုးရအရာရှိမြားနှငျ့ တှဆေုံ့ခဲ့ သညျ။ သူမသညျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျမြား၊ ရခိုငျပွညျနယျ တညျငွိမျအေးခမျြးရေးအထောကျအကူပွု ကျောမတီ ဥက်ကဋ်ဌ၊ အမြိုးသားလှတျတျော ဒုတိယဥက်ကဋ်ဌ ဦးအေးသာအောငျနှငျ့ ကျောမတီဝငျမြား၊ အမြိုးသား လှတျတျောနှငျ့ ပွညျသူ့လှတျတျော၏ ပွညျသူတို့၏တိုငျကွားစာဆိုငျရာ ကျောမတီမြားနှငျ့ တှဆေုံ့ခဲ့သညျ။
နရေပျစှနျ့ခှာသူစခနျးမြား ပိတျသိမျးရေး မဟာဗြူဟာရေးဆှဲခွငျးကို အပွီးသတျပွီး၊ ဖွနျ့ခြီရနျ အဆငျသငျ့ ရှိနခွေငျးကို သူမက ကွိုဆိုပါသညျ။ သို့သျော၊ ဥပမာအားဖွငျ့ မွပေုံမွို့တှငျ နရေပျစှနျ့ခှာသူ ၈၀ ရာခိုငျနှုနျး မှာ နိုငျငံသားအဖွဈ ခံယူထားသျောလညျး ၎င်းငျးတို့၏ သှားလာလှုပျရှားမှု လှတျလပျခှငျ့ကို အလှနျ ကနျ့သတျ ထားသဖွငျ့ သူမက စိတျပကျြမိပါသညျ။ သူမ၏ ဆှေးနှေးမှုမြားတှငျ လုံခွုံရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားနှငျ့ လူမှု အသိုငျးအဝိုငျးမြားအတှငျးနှငျ့ လူမှုအသိုငျးအဝိုငျးမြားအကွား ခှဲခွားမှုမြား ပါဝငျပါသညျ။ ယငျးကိစ်စရပျမြား ကို ဖွရှေငျးကြျောလှားကွရနျ သူမက အကွိမျကွိမျ အလေးထား ပွောကွားခဲ့သညျ။
ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး စီးပှားရေး၊ လူမှုအသိုငျးအဝိုငျးနှငျ့ နိုငျငံရေးနယျပယျ အသီးသီးမှ အမြိုးသမီး ၄၀ ကြျောနှငျ့ တှဆေုံ့ခဲ့ရာတှငျ နယျပယျစုံမှ အမြိုးသမီးမြားနှငျ့ အတှအေ့ကွုံဖလှယျပွီး၊ တူညီမှုမြားရှိသကဲ့သို့ ကှဲပွားသညျ့ အတှအေ့ကွုံမြားရှိနခွေငျးကို သိရှိခှငျ့ ရခဲ့ခွငျးကို ကွိုဆိုပါသညျ။ ထိုကဲ့သို့ တှဆေုံ့မှုမြားကို ထပျမံ စီစဉျခွငျး၊ လူမှုအသိုငျးအဝိုငျးမြား တှဆေုံ့ထိတှခွေ့ငျးတို့ဖွငျ့ ခိုငျမာမှုမရှိသော ယုံကွညျမှုကို ပွုပွငျ စနေိုငျသညျ။ အခြို့ အသိုငျးအဝိုငျးမြားအကွား ကူးလူးဆကျဆံမှုမှာ တဖွညျးဖွညျး ပွုပွငျပွောငျးလဲနေ သညျကို ကွားသိရသဖွငျ့ ထိုကဲ့သို့ ဆကျလကျလုပျဆောငျသှားရနျ သူမက အားပေးပါသညျ။
မွနျမာနိုငျငံအတှငျး ပိုမို သဟဇာတဖွဈသော အတူတကှနထေိုငျမှုကို ဦးတညျရနျလညျကောငျး၊ နရေပျစှနျ့ခှာသူမြားနှငျ့ ဒုက်ခသညျမြား လုံခွုံစှာ၊ သိက်ခာရှိစှာ မိမိတို့ရှေးခယျြထားသော နရေပျမြားသို့ မိမိဆန်ဒအလြောကျ ပွနျလညျ ရောကျရှိလာနိုငျရေးကို ဦးတညျသောအားဖွငျ့လညျးကောငျး၊ အထူး ကိုယျစားလှယျ၏ ခရီးစဉျ၌ အမြိုးသမီးရေးရာဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြား၊ ပညာရေး လကျလှမျးမီနိုငျရေး ကိစ်စရပျမြားနှငျ့ ယုံကွညျမှုတညျဆောကျရေးကိစ်စရပျမြားကို အရေးပေးခဲ့သညျ။
နပွေညျတျောတှငျ သူမသညျ အဆငျ့တူပုဂ်ဂိုလျပေါငျးစုံနှငျ့ ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ ဆှေးနှေးခဲ့သညျ။ နယူးယောကျမွို့ရှိ ကုလသမဂ်ဂအထှထှေညေီလာခံနှငျ့ လုံခွုံရေးကောငျစီတှငျ သူမ၏ လုပျဆောငျခကျြမြား ကို နပွေညျတျောတှငျ ရှငျးလငျးတငျပွခဲ့သညျ။
ရခိုငျပွညျနယျတှငျးရှိ ဆငျးရဲနှမျးပါးသော ကြောငျးသားမြား တက်ကသိုလျပညာရရှိနိုငျရေးကိုလညျးကောငျး၊ တပျမတျောနှငျ့ ရက်ခိုငျ့တပျမတျော အကွား အပဈအခတျရပျဆဲရေးကို စဉျဆကျမပွတျဆှေးနှေးရနျ လိုအပျခွငျးကိုလညျးကောငျးဆှေးနှေးခဲ့သညျ။ ပဋိပက်ခတှငျပါဝငျသူမြားမှ အပွညျပွညျဆိုငျရာ လူသားခငျြးစာနာမှုဥပဒမြေားကို လိုကျနာရနျ အရေးကွီးကွောငျးကို သူမက အလေးပေးပွောကွားခဲ့သညျ။ သူမအနနှေငျ့ နှဈခွမျးကှဲနသေော အယူအဆမြား ပိုမိုမြားပွားလာနသေညျကို ခံစားနရေသဖွငျ့၊ သကျဆိုငျနသေညျ့ ပွညျထောငျစုအစိုးရ၊ ရခိုငျပွညျနယျအစိုးရ၊ ဒသေခံ နိုငျငံရေးပါတီမြား၊ အရပျဖကျအဖှဲ့အစညျးမြားအပွငျ နရေပျစှနျ့ခှာသူမြားနှငျ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံတှငျ ရောကျရှိနသေော ဒုက်ခသညျမြားအကွားလညျးကောငျး၊ အခငျြးခငျြး၌လညျးကောငျး တှဆေုံ့ဆှေးနှေးဖို့လိုအပျကွောငျး အလေးအနကျပွောကွားခဲ့သညျ။
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံသို့ ဒုက်ခသညျမြား အစုလိုကျအပွုံလိုကျ ထှကျခှာစခေဲ့သညျ့ ဖွဈစဉျမြား၏ ဒုတိယ နှဈပတျလညျအကွိုတှငျ အပွုသဘောဆကျဆံခွငျးနှငျ့ လူထုအားလုံးကိုလကျကမျးပေးကွရနျ တောငျးဆို လိုကျပါသညျ။ ခှဲခွားဆကျဆံမှုမြား၊ အမုနျးစကားမြားနှငျ့ ဘာသာရေးကို နိုငျငံရေး ရညျရှယျခကျြဖွငျ့ အသုံးခခြွငျးမြားကို အစိုးရအနနှေငျ့လညျး ပွငျးထနျစှာ ဆနျ့ကငျြရနျ တိုကျတှနျးလိုကျပါသညျ။
This entry was posted in Uncategorized on July 19, 2019 by Aye Win.
Communication to the press after the official visit of the UN Special Envoy of the Secretary General on Myanmar, Christine Schraner-Burgener, to Myanmar from 09.-18.07.2019
Issued on behalf of the Office of the Special Envoy of the Secretary-General:
Nay Pyi Taw, 18 July 2019
The Special Envoy of the Secretary-General for Myanmar travelled to the country from9to 18 July. In Yangon, she met with representatives of civil society, think-tanks, eminent personalities and INGOs, the UN country team and the diplomatic corps. She also met with religious leaders, members of the Union Enterprise for Humanitarian Assistance and Development (UEHRD) and members of the former Rakhine Advisory Commission.
In Rakhine she travelled to Myebon and to Sittwe and visited IDP camps from both Rakhine and Muslim communities, as well as resettled Rakhine persons. She met with the representatives of civil society, political parties and members of parliament and the Rakhine State government. She also had discussions with the INGOs and with representatives of the resident UN agencies in Sittwe.
In Nay Pyi Taw, she met with various government officials, including the State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi; the Union Minister for Social Welfare, Relief and Resettlement Dr. Win Myat Aye; the Union Minister of Labour, Immigration and Population U Thein Swe; the Union Minister of Education Dr. Myo Thein Gyi; the Union Minister of the State Counsellor’s Office U Kyaw Tint Swe; the Union Minister of International Cooperation U Kyaw Tin, and the Vice-Senior General Soe Win of the Tatmadaw . She also met with members of parliament, in particular, U Aye Tha Aung, the Deputy Speaker of the Amyotha Hluttaw (Upper House) in his capacity as Chair of the Committee for Supporting Peace and Stability in Rakhine State (CSPSRS) together with some members of the Committee, and the Public Complaints Committees of the Amyotha Hluttaw and of the Pyithu Hluttaw (Lower House).
While welcoming the fact that the IDP Camp Closure Strategy had been finalised and was pending distribution, she regretted that for instance in Myebon, where over 80% of the IDPs have citizenship, their freedom of movement remained very limited. In her discussions, issues of security and divisions within and between the communities were raised. She repeatedly underlined the need to overcome them.
The meeting that she organised with over 40 women from different economic, social and political backgrounds all over Rakhine wasawelcome interaction, where there were common but also differing experiences. She hopes to be able to continue organising such encounters to allow the members of the communities to meet and engage with each other, asaway of mending their fragile trust. Over all, she heard that in certain areas the interaction between the communities was slowly improving and encouraged this to continue.
The Special Envoy’s mission focused on women, access to education and trust-building, asapath towards creating more harmonious cohabitation within Myanmar and contributing to conditions that would allow for the return of IDPs and refugees in safety, dignity and of their own free will to the places of their choice.
In Nay Pyi Taw, she had cordial and frank exchanges withabroad range of counterparts. The Special Envoy also briefed on her recent interactions with the General Assembly and the Security Council in New York.
She raised the question of access to tertiary education for poor students in Rakhine State and the need for continued engagement towardsaceasefire between the Tatmadaw and the Arakan Army. She also stressed the importance for all parties to the conflict to respect international humanitarian law. She underlinedaneed for dialogue amongst and between all stakeholders: the Union Government, the Rakhine State Government, local political parties, civil society as well as the IDPs and refugees in Bangladesh, as she sensedagrowing polarisation.
On the eve of the upcoming second anniversary of the events leading to the exodus of refugees to Bangladesh, she called for constructive engagement and efforts to reach out to the whole population. She also urged the government to stand strong against discrimination, hate-speech and the misuse of religion for political reasons. ENDS
MEDIA ADVISORY – Special Rapporteur on situation of human rights in Myanmar to visit Thailand and Malaysia
GENEVA (5 July 2019) – The Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Yanghee Lee, will visit Thailand and Malaysia from 8-18 July 2019.
“Despite Myanmar’s position, I will continue to reach out and seek to engage to provide the Government with assistance on human rights issues,” the Special Rapporteur said. Myanmar refuses to cooperate with the Special Rapporteur, and will not allow her access to the country.
Lee will holdanews conference at4pm on 18 July at the Marriott Hotel in Kuala Lumpur. Access will be strictly limited to journalists. The Special Rapporteur will present her findings and recommendations to the 74th session of the General Assembly in New York in October 2019.
This entry was posted in Uncategorized on July 6, 2019 by Aye Win.
Myanmar: Expert calls for continued pressure as situation reaches “human rights crisis”
GENEVA (3 July 2019) – A UN human rights expert implored the international community to maintain pressure on Myanmar amidadeterioration of human rights in the country, citing concerns about possible war crimes in Rakhine State, the treatment of minorities, the environment and freedom of expression.
The Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Yanghee Lee, addressed the Human Rights Council in Geneva and welcomed the Government’s reforms to the accounting requirements of extractive industry State-owned economic enterprises. “This is an opportunity for the Government to improve transparency in the sector, and to ensure that departments tasked with enforcing environmental and social safeguards are properly resourced,” the expert said.
In Hpakant,apool of mine waste burst in April, floodinganearby open pit mine and killing 54 workers. Pollution caused by the coal-powered Alpha Cement Factory in Mandalay led to protests that were violently suppressed by authorities. Independent scientific testing of air, water and hair samples taken near the coal-powered Tigyit Power Plant in Shan State found the plant to be leaching dangerous levels of toxic heavy metals into the surrounding environment.
Lee told the Council that freedom of expression continued to be stifled through draconian laws used to suppress criticism of the Tatmadaw, particularly in relation to reporting on the conflict with the Arakan Army in northern Rakhine State and parts of southern Chin State. The conflict has continued over the past few months and the impact on civilians is devastating, Lee said.
Acts of the Tatmadaw and the Arakan Army may amount to war crimes, the Special Rapporteur said. Indiscriminate attacks in and around villages as well as targeting of civilians and civilian objects, including monasteries hosting IDPs, has left scores of civilians wounded and dead. “I again call on all parties to uphold international humanitarian law and respect human rights law,” said Lee.
Lee said that Rohingya refugees in Cox’s Bazar are being subjected toahuman rights crisis, responsibility for which lies with Myanmar. It is entirely Myanmar’s responsibility to bring about all necessary conditions for all the people they forcibly drove out to return and they are entirely failing to do so, she said.
“So long as impunity for alleged atrocity crimes prevails, we will continue to bear witness to flagrant violations of rights perpetrated against ethnic minority populations in the name of counterinsurgency, entrenching grievances and prolonging insecurity and instability,” the Special Rapporteur said.
Lee repeated her call that the situation of Myanmar be referred to the International Criminal Court, and that alternatively the international community establish an independent tribunal in which perpetrators of international crimes may be tried.
“It is incumbent on the Security Council to findaway to put differences aside and unite in relation to Myanmar by coming out withastrong resolution,” said Lee. “The situation is not improving, and serious violations continue to take place onaregular basis.”
This entry was posted in Uncategorized on July 3, 2019 by Aye Win.
GENEVA (24 June 2019) – The Myanmar Government’s shutdown of mobile data networks in nine townships could have serious implications for human rights and humanitarian monitoring in the conflict areas of Rakhine and Chin States,aUN expert warned on Monday.
“I am told that the Tatmadaw is now conductinga‘clearance operation’, which we all know by now can beacover for committing gross human rights violations against the civilian population,” the UN expert said. “We must not forget that these are the same security forces that have so far avoided accountability for the atrocities committed against the Rohingya in Rakhine State less than two years ago.”
The conflict between the Arakan Army and the Tatmadaw has been ongoing since late 2018, with civilians bearing the brunt of the violence. Over 35,000 civilians have been displaced and dozens of civilians, including children, have been killed and injured by both indiscriminate and targeted attacks. Others, mainly ethnic Rakhine men, have died while in the military’s custody.
This entry was posted in Uncategorized on June 24, 2019 by Aye Win.
New Year Message from the UN Resident and Humanitarian Coordinator ai, Knut Ostby
I’m writing to wish you Happy Thingyan and auspicious entrance to Myanmar Era 1381.
We have hadachallenging year, but we managed to keep the focus on our objectives:
Maintain the momentum for the country’s peace, economic and democratic transitions for the benefit of all people;
Save lives by gaining greater humanitarian access;
Support sustainable solutions for Kachin, Rakhine and Shan States; and,
Engage in human rights advocacy.
In some ways, the past year was transformational. The Secretary-General appointed the Special Envoy on Myanmar; the Human Rights Council passedaresolution to establish an Independent Investigative Mechanism for Myanmar; and, we have substantially expanded our presence in Naypyidaw where more than 100 staff reside now, including the WFP and UNDP senior managers.
We produced the new Humanitarian Response Plan calling for US$202 million to assist approximately 941,000 vulnerable, crisis-affected people. With the support of the Country Task Force for Reporting and Monitoring, the Tatmadaw released more than 100 children and young people. We signedaseries of agreements with Japan on implementation of more than US$50 million in Kachin, Rakhine and Shan States. We finalized the Rakhine Strategic Cooperation Framework. UNHCR, UNDP and the Government signed an MoU on creating conditions conducive for the return of refugees who fled to Bangladesh. UNHCR and UNDP jointly carried out over 120 focus group discussions with over 1,400 community members in some 60 locations under the MoU.
We also supported high-level visits of Special Representative of the Secretary-General for Children in Conflict Ms. Virginia Gamba, Special Representative of the Secretary-General for Sexual Violence in Armed Conflict Pramila Patten, UNICEF Executive Director Henrietta H. Fore, former IOM’s Director General, Mr. William Lacy Swing, Deputy, Emergency Relief Coordinator Ursula Mueller and other UN officials. These visits required political, logistical, programmatic and media support from many of us. They contributed to achieving results, such as the signing of the Joint Communique between the United Nations and the Government of Myanmar to prevent and respond to conflict-related sexual violence.
Over the past 12 months, the UN issued 86 statements on the human rights situation in Rakhine State. The UN Country Team contributed to or prepared and released more than 20 of those statements.
Here areafew other examples of the results we achieved over the past 12 months:
UNFPA delivered contraceptives and family planning services to nearly halfamillion women and couples.
Because birth registration is the first right of the child andastepping stone to access services such as health, education and protection, 130,000 children under the age of 10 received their birth certificates with support from UNICEF.
UNOPS did US$ 98 million of public procurement for the Government of Myanmar for essential medicines to treat tuberculosis, malaria and AIDS, and for goods and equipment that helped flood victims restore their livelihoods and strengthen their resilience.
UN-Habitat and UN Environment supported Government of Myanmar in development of Myanmar Climate Change Policy, Strategy and Master plans in6sectoral areas which have been approved by the Union Cabinet.
ILO signed its first tripartite Decent Work Country Program and Parliament adoptedacomprehensive Occupational Safety and Health Law.
IOM works closely with key stakeholders to promote safe and rewarding migration, protect vulnerable migrants and prevent unsafe migration, while strengthening community resilience by supporting migrant health and disaster risk reduction efforts.
MIMU provided technical training for 300 persons and its web products were downloaded more than 70,000 times.
OCHA coordinated humanitarian response planning, resource mobilization and needs-based humanitarian assistance and protection for nearly one million people including over 240,000 internally displaced persons including women, children, and persons with disabilities living in camps or camp-like situations after fleeing violence in Kachin, Shan and Rakhine states.
Shan State high quality coffee is now sold in premium stores in France throughaUNODC’s support to farmers switching from opium to coffee cultivation.
With UNDP’s assistance, over 17,000 people in Rakhine affected by floods and conflict have seen their access to livelihoods, markets and services improved via inter-community cooperation for rehabilitation of local infrastructure.
UNESCO’s activities in safeguarding cultural heritage enabled completion of the assessment and stabilization of 389 monuments damaged by the earthquake in Bagan.
UN Women worked across 38 townships in5States in partnership with State and local governments, DSW, women’s committees, and CSOs to ensure that women from marginalized and conflict affected populations have increased livelihood security, protection services and are empowered to engage in building sustainable peace and resilience and benefit equally from humanitarian action.
UNHCR and its partners provided protection and shelter support to 156 IDP camps, distributed core relief items to 18,301 families and supported 3,994 displaced persons with specific needs. UNHCR also worked with the Governments of Myanmar and Thailand to facilitate the return of 565 refugees to Myanmar in February 2019.
WFP assisted almost 1 million people from the most food-insecure communities across Myanmar through emergency relief food assistance, school feeding, asset creation activities and nutrition interventions.
All of these are significant results achieved under difficult circumstances. But there is much more work to be done under each of the pillars of our work – peace, development, human rights and humanitarian assistance, particularly under the nexus approach.
This year, we will continue to consult with the Government the UN Development Framework Agreement (UNDAF) that will be central to UN’s support to Myanmar. We will also look for entry points for the provision of support to the milestone 2020 election. We will move forward the preparation of the Kachin and Shan States strategic cooperation frameworks. There is, of course, much more that we will deliver across our diverse portfolios.
I am optimistic that with your talent and commitment, the UN will remainaforceful actor for change in Myanmar in the New Year. The Sustainable Development Goals – and eventually the UNDAF – will continue to guide us. The ongoing reform of the UN Development System will allow us further to strengthen our coherence, efficiency and effectiveness — firmly positioning the UN asatrusted partner in buildingasustainable future for all in Myanmar.
This entry was posted in Uncategorized on April 12, 2019 by Aye Win.
ကုလသမဂ္ဂဌာနေညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဌာနေညှိနှိုင်းရေးမှူး (ယာယီ) Knut Ostby ၏နှစ်သစ်ကူးနှုတ်ခွန်းဆက်သ၀ဏ်လွှာ။
ချစ်ခင်ရပါသော မိတ်ဆွေများနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များခင်ဗျာ
ပျော်ရွှင်ဖွယ်သင်္ကြန်ဖြစ်စေကြောင်းနှင့် မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံသော မြန်မာ့နှစ်သစ် ၁၃၈၁ အတွက် ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးရန် ဤစာကို ရေးသားလိုက်ရပါသည်။
ကုန်လွန်ခဲ့သော နှစ်ဟောင်းသည် ကျွန်တော်တို့အတွက် စိန်ခေါ်မှုများစွာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသော နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း ကျွန်တော်တို့သည် ကျွန်တော်တို့၏ အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ဦးတည်စူးစိုက်ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ကြပါသည် –
ပြည်သူများအားလုံး၏ အကျိုးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော နိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ ကူးပြောင်းရေးတို့အား အရှိန်အဟုန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ကူညီပံ့ပိုးပေးရန်၊
လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများကို ပိုမို လက်လှမ်းမီ ရရှိစေခြင်းဖြင့် အသက်များကို ကယ်တင်ရန်၊
ကချင်၊ ရခိုင်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်များအတွက် ရေရှည်ဖြေရှင်းပေးနိုင်မည့် နည်းလမ်းများ ရှာဖွေနိုင်အောင် ကူညီပံ့ပိုးပေးရန်၊
လူ့အခွင့်အရေးများအတွက် တွန်းအားပေးဆွေးနွေးမှုများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်၊
ပြီးခဲ့သောနှစ်သည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည့် နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်ပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်ကို ခန့်အပ်ခဲ့ခြင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သီးခြားလွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု ချမှတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းတို့ ရှိခဲ့ပြီး ကျွန်တော်တို့သည်လည်း နေပြည်တော်တွင် ရုံးထိုင်မှုများကို အများအပြား တိုးချဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်ကာ ယခုအခါ WFP နှင့် UNDP မှ အကြီးတန်းမန်နေဂျာများအပါအဝင် ကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်းပေါင်း ၁၀၀ ကျော်သည် နေပြည်တော်တွင် ရုံးထိုင်လျက် ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့သည် အရေးပေါ်အခြေအနေကြောင့် နစ်နာဆုံးရှုံးကြရသည့် ထိခိုက်လွယ်သူပေါင်း ၉၄၁,၀၀၀ ခန့်ကို အကူ အညီများ ပေးအပ်ရန်အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀၂ သန်း တောင်းဆိုထားသည့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဖြင့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်သစ်တစ်ရပ်အား ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ အစီရင်ခံရေးနှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး ဌာနေအထူး လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ အကူအညီဖြင့် တပ်မတော်သည် ကလေးနှင့် လူငယ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်အား နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ကချင်၊ ရခိုင်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်များတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ ကျော်အသုံးပြုကာ လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် ဂျပန်နှင့် သဘောတူစာချုပ်များ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက် မဟာဗျူဟာကျ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး မူဘောင်ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ အပြီးသတ်ရေးဆွဲခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ UNHCR၊ UNDP နှင့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးသွားသော ဒုက္ခသည်များ နေရပ်ပြန်လာနိုင်ရန် အားပေးထောက်ကူသည့် အခြေအနေများ ဖန်တီးပေးရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MoU) တစ်ခုကို လက်မှတ်ရေး ထိုးခဲ့ပါသည်။ MoU အရ UNHCR နှင့် UNDP တို့ ပူးပေါင်း၍ နေရာပေါင်း ၆၀ ခန့်ရှိ လူပေါင်း ၁,၄၀၀ ကျော်နှင့် ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးပွဲပေါင်း ၁၂၀ ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ထို့ပြင် ကျွန်တော်တို့သည် ပဋိပက္ခအတွင်းရှိ ကလေးများအတွက် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စဗာဂျီးနီးယားဂမ်ဘာ၊ ပဋိပက္ခအတွင်း အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စပရာမီလာပက်တန်၊ UNICEF အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဟန်နရီရက်တာ အိတ်ခ်ျ ဖိုး၊ IOM ၏ ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ် မစ္စတာ ဝီလျံလေစီဆွင်း၊ အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေး ဒုတိယညှိနှိုင်းရေးမှူး အာဆူလာမြူလာနှင့် အခြားသော UN အရာရှိများ၏ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ် များအတွက်လည်း ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြပါသည်။ ထိုခရီးစဉ်များတွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ UN ဝန်ထမ်းအများအပြားထံမှ နိုင်ငံရေး၊ ထောက်ပံ့ဖြည့်ဆည်းရေး၊ အစီအစဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် မီဒီယာဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှုများ လိုအပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုခရီးစဉ်များကြောင့် ရလဒ်ကောင်းများ ရရှိခဲ့ရာ ဥပမာတစ်ခုမှာ ကုလသမဂ္ဂနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကြား ပဋိပက္ခအတွင်း လိင်အကြမ်းဖက်မှု တားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေး ပူးတွဲကြေညာချက် လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သော ၁၂ လတာကာလအတွင်းတွင် UN သည် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေများနှင့်စပ်လျဉ်းသည် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် ၈၆ ခုကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ထိုထုတ်ပြန်ချက်များထဲမှ ၂၀ ကျော်အား UN ဌာနေအဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်ခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပြန်နိုင်ရန် ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သော ၁၂ လတာကာလအတွင်း ကျွန်တော်တို့ စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သော ရလဒ်အချို့ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည် –
UNFPA သည် အမျိုးသမီးများနှင့် စုံတွဲပေါင်း သန်းတစ်ဝက်နီးပါးခန့်အတွက် သားဆက်ခြားဆေးဝါးပစ္စည်းများနှင့် မိသားစုစီမံကိန်း ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
မွေးစာရင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းသည် ကလေးများ၏ ပထမဆုံးသောအခွင့်အရေးဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုကဲ့သို့သော ဝန်ဆောင်မှုများကို လက်လှမ်းမီရရှိရေးအတွက် လိုအပ်ချက်တစ်ရပ် ဖြစ်ရာ UNICEF သည် အသက် ၁၀ နှစ်အောက် ကလေးပေါင်း ၁၃၀,၀၀၀ အား မွေးစာရင်းများ ရရှိအောင် ကူညီပံ့ပိုးပေး ခဲ့ပါသည်။
UNOPS သည် တီဘီ၊ ငှက်ဖျားနှင့် AIDS ရောဂါတို့ကို ကုသရန်အတွက် အခြေခံ ဆေးဝါးများ၊ ရေဘေးဒဏ်သင့် ပြည်သူများအား ၎င်းတို့၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ထူထောင်ရန်နှင့် ဘေးအန္တရာယ် ရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်း ပိုမိုမြင့်မားလာစေရန် အထောက်အကူပြုမည့် ပစ္စည်းများနှင့် ကိရိယာများ စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၈ သန်းဖိုးအား မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအတွက် အများပြည်သူဆိုင်ရာ ဝယ်ယူမှု (public procurement) လုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် ဝယ်ယူပေးခဲ့ပါသည်။
UN-Habitat နှင့် UN Environment တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအား မြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုမူဝါဒ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှ အတည်ပြုပေးခဲ့သည့် ကဏ္ဍနယ်ပယ် ၆ ခုအတွက် မူဝါဒနှင့် ပင်မစီမံကိန်းများ ရေးဆွဲ နိုင်အောင် ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ပါသည်။
ILO သည် အစိုးရ၊ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား သုံးဦးသုံးဖလှယ်အား ပံ့ပိုးကူညီပေးသည့် ၎င်း၏ ပထမဆုံးသော သင့်တင့်သောအလုပ်အကိုင်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အစီအစဉ် (Decent Work Country Program) ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး လွှတ်တော်မှ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဥပဒေကို အတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။
IOM သည် ဘေးကင်းလုံခြုံ၍ အကျိုးရှိသော ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုကို အားပေးမြှင့်တင်ရန်၊ ထိခိုက်လွယ်သော ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်နှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမရှိသော ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုကို တားဆီးကာကွယ်ရန်အတွက် အဓိကျသော အကျိုးသက်ဆိုင်သူများနှင့် အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သလို ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ လျှော့ချရေး ပံ့ပိုးကူညီမှု များမှတစ်ဆင့် ရပ်ရွာလူထု၏ ဘေးအန္တရာယ်ရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်း မြင့်မားလာအောင် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
MIMU သည် မြေပုံပေါင်း ၅၉၇ ပုံ ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး လူပေါင်း ၃၀၀ အတွက် နည်းပညာသင်တန်းများ ပေးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းဌာနမှ Web products များအား အကြိမ်ပေါင်း ၇၀,၀၀၀ ကျော် download လုပ်ခြင်းခံရပါသည်။
OCHA သည် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဖြင့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေး စီမံကိန်း ရေးဆွဲမှု၊ အရင်းအမြစ်များ ဆော်သြစည်းရုံးမှု၊ ကချင်၊ ရှမ်းနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်များတွင် အကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် နေရပ်စွန့်ခွာကာ စခန်းများ သို့မဟုတ် စခန်းနှင့်တူသော အခြေအနေများတွင် နေထိုင်နေရသော အမျိုးသမီး၊ ကလေးနှင့် မသန်စွမ်းသူပေါင်း ၂၄၀,၀၀၀ ကျော် အပါအဝင် လူပေါင်းတစ်သန်းနီးပါးအတွက် လိုအပ်ချက်များ အခြေခံသော လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့ ပါသည်။
UNODC မှ တောင်သူများအား ဘိန်းအစား ကော်ဖီအစားထိုးစိုက်ပျိုးရန် ကူညီပံ့ပိုးမှုများမှတစ်ဆင့် ယခုအခါ ရှမ်းပြည်နယ်မှ အရည်အသွေးမြင့် ကော်ဖီများကို ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ အကောင်းဆုံးစတိုးဆိုင်များ ရောင်းချနေပြီ ဖြစ်သည်။
UNDP ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ရေကြီးရေလျှံနှင့် ပဋိပက္ခဒဏ်သင့်ခဲ့သော လူပေါင်း ၁၇,၀၀၀ ကျော်သည် ၎င်းတို့ဒေသရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း များကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများမှတစ်ဆင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုလုပ်ငန်း၊ ဈေးကွက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပိုမို လက်လှမ်းမီ ရရှိခဲ့ကြပါသည်။
UNESCO ၏ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်းများကြောင့် ပုဂံရှိ ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးခဲ့သော သမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံပေါင်း ၃၈၉ ခုအား စစ်ဆေးမှုနှင့် ပြုပြင်မှုများကို ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
UN Women သည် ပြည်နယ် ၅ ခုရှိ မြို့နယ်ပေါင်း ၃၈ ခုတွင် ပြည်နယ်နှင့် ဒေသန္တရအစိုးရများ၊ DSW၊ အမျိုး သမီးကော်မတီများ၊ CSO များနှင့် လက်တွဲကာ ပစ်ပယ်ခံရသော၊ ပဋိပက္ခဒဏ်သင့်သော လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ ထဲမှ အမျိုးသမီးများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုလုပ်ငန်းများ အာမခံချက်ရှိရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ရေးဝန်ဆောင်မှုများ တိုးတက်ရရှိရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်း တည်ဆောက်ရာ တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် အမျိုးသမီးများအား စွမ်းပကားမြှင့်တင်ရေး၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဆောင်ရွက်ချက်များမှ တန်းတူညီမျှ အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
UNHCR နှင့် ၎င်း၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ့စည်းများသည် IDP စခန်းပေါင်း ၁၅၆ ခုအတွက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့် အမိုးအကာဆိုင်ရာ ကူညီပံ့ပိုးမှုများ ပေးခဲ့ပြီး မိသားစုပေါင်း ၁၈,၃၀၁ စုအတွက် အဓိကကျသည့် ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းများ ဝေငှပေးကာ သီးခြားလိုအပ်ချက်များရှိသည့် နေရပ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းရသူပေါင်း ၃,၉၉၄ ဦးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် UNHCR သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဒုက္ခသည်ပေါင်း ၅၆၅ ဦး နေရပ်ပြန်နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၊ ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရတို့နှင့်အတူ လက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
WFP သည် အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေး စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့မှုများ၊ ကျောင်းများတွင် အာဟာရကျွေးမွေးရေး အစီအစဉ်များ၊ ရပ်ရွာအခြေခံအဆောက်အအုံတည်ဆောက်ပေးရေး အစီအစဉ်များနှင့် အာဟာရအစီအစဉ်များ မှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု အနည်းပါးဆုံးသော လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများမှ လူပေါင်း ၁ သန်းနီးပါးအတွက် အကူအညီများ ပံ့ပိုးထောက်ပံ့ခဲ့ပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ရလဒ်များအားလုံးသည် ခက်ခဲသော အခြေအနေများကြားမှ အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည့် အရေးပါသော ရလဒ်များ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့ အားထုတ်ကြိုးပမ်းနေသည့် မဏ္ဍိုင်များဖြစ်သော ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီ ဟူသော မဏ္ဍိုင်တစ်ခုချင်းစီအောင်တွင် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းပေါင်းများစွာ ရှိနေပါသေးသည်။ အထူးသဖြင့် ထိုမဏ္ဍိုင်သုံးခုအား အပြန်အလှန်ဆက်နွှယ် ချိတ်ဆက်ကာ ဆောင်ရွက်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်သည်။
ယခုနှစ်တွင် ကျွန်တော်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် UN ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုများတွင် အခရာကျသော မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ကုလသမဂ္ဂအကူအညီမူဘောင် (UNDAF) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆက်လက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသွားမည် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ကျွန်တော်တို့သည် ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်မည့် ဝင်ပေါက်များကိုလည်း ရှာဖွေသွား မည်ဖြစ်သည်။ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အတွက် မဟာဗျူဟာကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး မူဘောင်များကိုလည်း ဆက်လက်ရေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ကျွန်တော်တို့၏ အမျိုးမျိုးသော UN အဖွဲ့အစည်းများမှတစ်ဆင့် အခြားသော လုပ်ငန်းအများအပြားကို ဆောင်ရွက်သွားကြရန် ရှိပါသည်။
မိတ်ဆွေများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားလုံး၏ ကျွမ်းကျင်မှု၊ အားထုတ်လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့သည် နှစ်သစ်တွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ အပြောင်းအလဲများအတွက် တွန်းအားပေးလုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်ရှိနေလိမ့်မည်ဟု ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပန်းတိုင်များနှင့် UNDAF တို့က ကျွန်တော်တို့အား ဆက်လက်လမ်းညွှန်မှု ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်သည့် UN ဖွံ့ဖြိုးမှုစနစ်၏ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများကလည်း ကျွန်တော်တို့၏ အစပ်အဟပ်မိမိ ဆောင်ရွက်နိုင်မှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝမှုနှင့် ထိရောက်မှုတို့ အားကောင်းအောင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်သူများ အားလုံးအတွက် ရေရှည် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အနာဂတ်တစ်ခု တည်ဆောက်ရာတွင် UN သည် ယုံကြည်အားထားရသော မိတ်ဖက်တစ်ဦး အဖြစ် အခိုင်အမာ ရပ်တည်နိုင်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ပျော်ရွှင်သောနှစ်သစ် ဖြစ်စေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်။
Myanmar: New land law could have disastrous impact on ethnic minorities
· Law affects traditional communities who passed down land for generations
· Revenues from resource extraction going to army and its allies
· Alleged crimes committed in Myanmar must be referred to ICC
GENEVA (11 March 2019) – A UN expert has expressed grave concerns about the implementation ofanew land law in Myanmar, affectingathird of the country, and the disastrous implications for traditional farming communities in ethnic minority regions.
“Today marks the day that thousands of people living in rural areas in Myanmar may be charged with criminal trespass if they continue to use their lands as they have done for generations,” Yanghee Lee, the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, told the Human Rights Council in Geneva.
She said the amended Vacant, Fallow and Virgin Lands Management Law fails to recognise shared land ownership practices, such as customary tenure, and land belonging to IDPs and refugees of conflict that has been left unattended. “The Law does not sufficiently recognise this reality,” Lee said. “The Law affects so many people, and with land insecurity central to the cycle of conflict, poverty and denial of rights, it has the potential to be disastrous.”
The law, which comes into effect on 11 March 2019, requires anyone occupying or using “vacant, fallow, or virgin” land to apply forapermit to use the land for 30 years or face eviction and up to two years in jail. She called on the Government to immediately suspend and review the law.
Lee also raised serious concerns about natural resource extraction, saying it was the one area of the economy she received more reports of human rights abuse in relation to than any other.
“Military-dominated state-owned economic enterprises in natural resource extraction are the regulators, revenue collectors and commercial entities, and they are permitted to retain vast profits that bypass the Government budget with no record kept on how they are spent,” she said.
“Revenues from natural resource extraction needed for vital services and development being diverted to the military and its allies, undermines the civilian Government, democratic reforms, the peace process, sustainable development and the realisation of rights.”
The Special Rapporteur said the Union of Myanmar Economic Holdings Ltd. and Myanmar Economic Corporation were active across many sectors, including natural resource extraction. “The full extent of their business operations and profits are unclear, but their main beneficiaries are most likely to be high-ranking military and ex-military officials,” she said.
Lee said armed conflict continued in northern Shan between ethnic armed organisations and in Rakhine State between the Arakan Army and the Tatmadaw, and civilians were facing rights abuses asaresult. Lee called on all parties to end hostilities, and to ensure that they take precautions and protect civilians.
She urged the international community to continue to work for justice for victims in Myanmar. Given that the road to justice was long and uncertain, she said, it was paramount that victims’ needs were addressed. “There is much that Myanmar must do to deal with the past. Reversing the continued stance of denial, and shifting to recognition and acknowledgement would goalong way to bringing about an end to impunity that has long existed in Myanmar.”
Lee called for the situation in Myanmar to be referred to the International Criminal Court by the Security Council, orastate party or group of states parties. “Victims must not be forced to wait in the purgatory of international inaction,” she said, adding if it was not possible to refer the situation to the ICC, the international community should consider establishing an independent tribunal.
This entry was posted in Uncategorized on March 11, 2019 by Aye Win.
Statement attributable to the Spokesman for the Secretary-General on the Ethiopian Airlines crash / အီသီယိုးပီးယား လေကြောင်းပျက်ကျမှုအပေါ် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ၏ ထုတ်ပြန်ချက်
The Secretary-General was deeply saddened at the tragic loss of lives in the airplane crash today near Addis Ababa. He conveys his heartfelt sympathies and solidarity to the victims’ families and loved ones, including those of United Nations staff members, as well as sincere condolences to the Government and people of Ethiopia.
The United Nations is in contact with the Ethiopian authorities and working closely with them to establish the details of United Nations personnel who lost their lives in this tragedy.
မတ်လ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၁၉။
အီသီယိုးပီးယား လေကြောင်းပျက်ကျမှုအပေါ် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ၏ ထုတ်ပြန်ချက်
Stephane Dujarric, ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ
ယနေ့ အဒစ် အဘာဘာ (Addis Ababa) အနီးတွင် လေယာဉ်ပျက်ကျမှုကြောင့် ကြေကွဲဖွယ်ရာ အသက်ဆုံးရှူံးမှုများအတွက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်မှ လွန်စွာဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂ ၀န်ထမ်းများအပါအ၀င် အသက်ဆုံးရှူံးခဲ့ရသူများ၏ မိသားစုဝင်များ၊ ချစ်ခင်ရသူများကို ထပ်တူစာနာပြီး ၄င်းတို့နှင့်တသားတည်းရှိပါကြောင်း နှင့် အီသီယိုးပီးယားအစိုးရနှင့် ပြည်သူများနှင့်လည်း ထပ်တူ ၀မ်းနည်းကြေကွဲရပါကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။
ဤကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ရပ်တွင် အသက်ဆုံးရှူံးခဲ့ရသည့် ကုလသမဂ္ဂ၀န်ထမ်းများ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရရှိနိုင်ရန် ကုလသမဂ္ဂသည် အီသီယိုးပီးယားမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဆက်သွယ်ပြီး အနီးကပ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။